Yini umehluko phakathi kwalokho iNkosi ekuphathise abantu Ngenkathi Yomusa nalokho uNkulunkulu akuphathise abantu Ngenkathi Yombuso?
2018-04-07 08:53:49 34
Okwedlule: Yini umehluko phakathi kwempilo yebandla Ngenkathi Yomusa nempilo yebandla Ngenkathi Yombuso?
INkosi uJesu uqobo waphrofetha ukuthi uNkulunkulu uyoba sesimweni somuntu ngezikhathi zokugcina futhi uyovela njengeNdodana yomuntu ukuzokwenza umsebenzi.
1.INkosi uJesu uqobo waphrofetha ukuthi uNkulunkulu uyoba sesimweni somuntu ngezikhathi zokugcina futhi uyovela njengeNdodana yomuntu ukuzokwenza ums…
3. Yini imvelo yenkinga yokuba umuntu angalazisi iqiniso elichazwe nguKristu? Yini umphumela wokuba umuntu engathathi uKristu njengoNkulunkulu? Izikho…